Akụkọ - Ngwa nlekota ibu nchekwa nwere ike dozie nsogbu ahụ?
Ọnwụ 7 na mmerụ ahụ 2…. Ihe mberede ọzọ mere kreenụ ụlọ elu ahụ….
N'afọ a, ole ihe mberede kreenụ ụlọ elu mere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ ọ bụla ọzọ.Ọ bụrụ na ị na-akpachara anya na-amụ ndị ụlọ elu crane ihe mberede, ekwe omume management ihe fọrọ nke nta ka otu, n'ihi na ọ dịghị ụlọ elu kreenu nchekwa ngwaahịa nlekota oru.
Ngwá ọrụ nlekota ọgụgụ isi nwere ike dozie nsogbu ahụ?Azịza ya bụ ee.
Chengdu RECEN THCHNOLOGY mepere echiche ọhụrụ, echiche ọhụrụ na ụzọ ọhụrụ nke njikwa mmepụta nchekwa iji nabata mbata nke oge njikwa nchekwa nchekwa mmepụta ihe.Na ọmụmụ nke smart ewu saịtị, anyị ụlọ ọrụ nyere kreenu ibu egosi ọhụrụ connotations ka etinyere nchekwa mmepụta management, tinyere nwere ọgụgụ isi technology na imewe echiche, na nchekwa ibu egosi ewu saịtị nwere ike guzobe.
Ọrụ nlekota na mkpu nke akụrụngwa nlekota ibu nchekwa anyị enwetala nnukwu nsonaazụ.Na-ewere usoro nlekota ụlọ elu crane dị ugbu a dị ka ihe atụ, usoro nlekota ụlọ elu crane nwere ike ịkwado ya na ọrụ igbe ojii, nke nwere ike ịrụ ụlọ elu crane jacking na nlekota ngalaba, nlekota oru ọdịda ngwaọrụ nchekwa, ọrụ nke na saịtị tupu oti mkpu. na njikwa dịpụrụ adịpụ nke ozi olu na data nke teknụzụ nchekwa na-enye nwere ike mezue ntinye akwụkwọ crane, njikwa ozi bụ isi, nleba anya oge, mkpu na ọnụ ọgụgụ.
Ngwaahịa anyị abụghị naanị na-aṅa ntị na nhazi nke ngwaike na ngwanrọ, kamakwa na-eburu n'uche mmekọrịta dị n'etiti njikwa crane ụlọ elu na njikwa saịtị.Dịka ọmụmaatụ, ozi ndị ọrụ metụtara kreenụ ụlọ elu a gụnyere ndị ọrụ nchekwa, ndị na-ahụ maka akụrụngwa na ndị na-ahụ maka nchekwa, ndị na-ahụ maka eriri USB, ndị otu ndị ọrụ na-ebuli ihe, na ndị ọrụ ndị ọzọ.Enwere ike ịnakọta ozi a, yana kreenụ ụlọ elu a metụtara ebe a na-ewu ihe niile.Enwere ike igosipụta mmekọrịta dị ize ndụ nke njikwa nchekwa.
Iji nabata mbata nke oge njikwa ọgụgụ isi nke mmepụta nchekwa, ọ dị mkpa ịmepụta echiche, echiche na ụzọ nke njikwa mmepụta nchekwa.
N'ọdịnihu, "Internet + smart ụlọ" ga-amalite na nchekwa.Usoro nlekota kreen anyị nwere ike nyochaa ma zaghachi ozi gbasara ihe dị iche iche nke ebe a na-ewu ihe.N'otu oge ahụ, ọ nwekwara ike ịme nyocha zuru oke nke ebe a na-ewu ihe owuwu na ọbụna ebe a na-ewu ihe na-adabere na nchịkọta ozi nke ebe nlekota.Enyere akụkọ ebumnuche maka ọnọdụ mmepụta nchekwa nchekwa nke ụlọ ọrụ ahụ iji chetara ụlọ ọrụ na ebe a na-ewu ụlọ ka ha na-aga n'ihu na-emeziwanye ọnọdụ nrụpụta nchekwa ka ọ na-aga n'ihu na-emezi ọkwa njikwa ihe nchekwa nchekwa ma gbochie ma ọ bụ belata ihe mberede nchekwa nchekwa mmepụta.
Ekwentị: +86 28 68386566
Oge nzipu: Dec-28-2021
Nchekwa Ugo elu Tower Crane, Ihe ngosipụta oge ibu crane Tower, Ngosipụta oge ibu, Sistemụ nchikota maka ụlọ elu crane, Chọrọ nchekwa nchekwa ụlọ elu crane, Mobile Crane Qatar,